Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Filibiin News » Madaxweynaha Filibiin oo ka baxay siyaasadda » Page 2
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Filibiin News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Halyeeyga Feerka Manny Pacquiao ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee Jimcihii soo gudbiya murashaxnimadiisa doorashada madaxtinimada.
Duqa magaalada Manila Francisco 'Isko' Moreno, oo ay weheliyaan senetarka iyo taliyihii hore ee booliska Panfilo Lacson, ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay damacsan yihiin inay u tartamaan jagada.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in ay muhiim u tahay Duterte in uu yeesho qof daacad u ah oo ka ilaaliya in laga qaado tallaabo sharci ah - guriga ama Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah - kumanaan dilal dowladeed oo ka dhan ah dagaalladii daroogada tan iyo 2016kii.
"Waxaan ku qaadan lahaa dhawaaqiisa milix badan," Carlos Conde, Filibiin cilmi-baare Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay New York, ayaa yiri. - Laakiin haddii loo maleeyo inuu dhab ahaan hawlgab noqonayo, taasi micnaheedu maahan inuusan ka heli doonin ilaalin ICC ee uu jecel yahay. ”
Bartamihii Sebtembar, the Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) dalka Holland ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan dilal aan sharciga waafaqsanayn iyo dambiyo kale oo la galay intii uu socday dagaalkii bahalnimada ahaa ee ka dhanka ahaa daawooyinka uu Duterte ka bilaabay Filibiin. Markii uu noqday madaxweynaha, wuxuu ballanqaaday inuu dalka ka sifeyn doono mukhaadaraadka, wuxuuna ku amray booliiska inay toogtaan dadka ka ganacsada maandooriyaha iyo dadka balwada leh haddii ay saraakiishu rumaystaan ​​inay halis ku jiraan.
Sida laga soo xigtay xogta dawladda Filibiin, 6,181 qof ayaa lagu dilay hawlgallo booliis tan iyo 2016. Hase yeeshee, sida laga soo xigtay ICC, tirada dhabta ahi waxay noqon kartaa inta u dhaxaysa 12,000 iyo 30,000, oo ku tilmaamaysa ficillada fuliyayaasha sharciga inay yihiin “weerar baahsan oo nidaamsan oo ka dhan ah dadka rayidka ah.”
Duterte ayaa dhowr jeer qarxiyay baaritaanka, isagoo ku andacoonaya in Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada aysan awood u lahayn Filibiin ka dib markii qaranku ka baxay ICC -da bishii Maarso 2019, wuxuuna wacad ku maray inuu baarayaasha dalka ka mamnuucayo. Si kastaba ha ahaatee, ICC waxay ku adkaysanaysaa inay awood u leedahay inay baarto dambiyada ay ku andacoonayso inay ka galeen gobolka Koonfur -bari Aasiya intii u dhaxaysay 2017 iyo 2019 oo ay weli xubin ka ahayd.
Baadhitaanka ICC -da ayaa ka dhigaysa doorashada madaxtinimada ee soo socota mid muhiim u ah xerada Duterte, maadaama murashaxa xisbi siyaasadeed oo la tartamaya oo la wareegaya guusha uu si fiican ugu furi karo madaxweynaha dacwad oogista.